Nagu saabsan | Doc.com
Doc.com waxaa lagu bilaabay hadafka ah in dunida la siiyo qaab cusub oo ah daryeel caafimaad oo aasaasi ah oo lacag la’aan ah oo waara oo aan ku xirnayn nidaamyada daryeelka caafimaad ee dhaqameed ee ka jira dhammaan qaybaha adduunka.
Illaa iyo hadda Doc.com waxay siisay adeegyo daryeel caafimaad oo aan wax lacag ah ku bixin kumanaan bukaan ah oo ku nool in ka badan 20 dal oo horumarinaya noloshooda. Tan waxaa lagu gaadhay abuurista qaab ganacsi oo hal -abuur leh si “Daryeelka Caafimaadka Aasaasiga ah ee Bilaashka ah” loogu heli karo qof kasta oo heli kara kombiyuutar ama taleefan gacmeed.
Charles Nader wuxuu macalimiintiisa u soo bandhigay qaabka ganacsi ee cusub ee barnaamijka Blitzscaling ee Stanford kaas oo ay ka mid ahaayeen Ried Hoffman, aasaasihii Linkedin iyo Chris Yeh, oo ahaa qoraa ganacsi oo caan ah iyo maal -gashade. Ka dib markii uu helay jawaab -celin togan iyo Chris Yeh oo ugu yeeraya qaabka telemedicine -ka badeecada 10X, shirkaddu waxay aruurisay lacag si ay u horumariso qaybteeda xogta xannibaadda oo ay u fidiso adeegyada dalal kale oo ka baxsan Mexico. Tani waxay siisay shirkadda awood ay ku ballaariso in ka badan 20 dal oo ku yaal Laatiin Ameerika oo ay ku kordhiso horumarkeeda si ay u siiso wax soo saar aad u xoog badan, dul saaran macaamiisha badan, iyo sidoo kale inay hagaajiso oo hagaajiso shirkadda sida iibsashada magaca Doc.com iyo kordhinta horumarinta farsamada iyo ganacsiga qaybaha kale ee goobta daryeelka caafimaadka. Doc.com waxay ballaarisay adeegyadeeda iyadoo ku dartay gaarsiinta dawada guriga Meksiko iyo noqoshada qaybiyaha dawooyinka Latin America. Charles Nader, oo ah maamulaha guud ee Doc.com, ayaa lagu soo bandhigay jaldiga Forbes magazine laba jeer oo matalayay Doc.com. Majalladdu waxay ku tilmaamtay shirkadda inay tahay unicorn Laatiin Ameerika ah waxaana lagu xusay qoraalo kale oo badan iyo warbaahin.
Maanta, Doc.com waxay bixisaa adeegyadeeda “Daryeelka Aasaasiga ah ee Bilaashka ah”, iyo sidoo kale adeegyada qiimaha jaban, in ka badan boqol luqadood oo qaab qoraal ah iyo telemedicine fiidiyowga Ingiriisiga iyo Isbaanishka iyada oo loo sii marayo Doc App, in ka badan 20 dal oo badankood ku yaal Latin America iyo Mareykanka oo leh qorshayaal ballaarinta adduunka intiisa kale.
Macaamiisha waxaa ka mid ah shirkadaha caymiska, Telecom, iyo kuwo kale oo ku jira warshado kala duwan. Doc.com ayaa sidoo kale noqotay lammaane rasmi ah oo leh bixiyeyaasha tallaalka intii lagu jiray cudurka faafa si ay u siiyaan dawooyinka Covid adduunka. Iyada oo loo marayo iskaashiyadan, iyada oo la kaashanayo dawladaha. Doc.com waxay qiimo ku kordhineysaa wax -soo -saarkeeda wax -soo -saarka si loo caawiyo dadka u baahan inta lagu jiro aafada.
Iyada oo la fahmay gaaritaanka teknolojiyadda kacaan ka dhigaysa dunidan aan ku nool nahay, Doc.com waxay isku dartay teknolojiyadda waxayna aliftay qaab ganacsi oo cusub oo quudiya ka soo baxa falanqaynta cudurrada faafa, blockchain-crypto-economy, telemedicine iyo iibinta dawooyinka si loo siiyo bukaanno badan oo lacag la'aan ah adeegyada daryeelka caafimaadka. Waxay asal ahaan soo saartay nidaam is -waara oo aan kaliya u shaqayn sidii aalad cilmiyeed oo loogu talagalay faa'iidada aadanaha, laakiin sidoo kale waxay siisaa gargaarka loo baahan yahay dadka u baahan adduunka oo dhan waxa aan rumeysannahay inay tahay qeybta ugu muhiimsan nolosha… Caafimaadka.
Sababtoo ah caafimaad la'aan, ha noqoto caafimaadka maskaxda ama caafimaadka jirka; Dadnimadu ma gaari karto sida ugu fiican ee ay awooddo.
Daryeelka Caafimaadka Aasaasiga ah ee Bilaashka ah ee dhammaan ... Xuquuqda Aadanaha… Doc wuxuu bixiyaa nuqulkeenna oo sii wanaajinaya oo koraya marba marka ay sii socoto waddo wanaagsan oo xagga mustaqbalka ah iyo natiijooyin la qiyaasi karo. Ku nool yahay saamayn togan.